पहिचानको मुद्दा र संघीयता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पहिचानको मुद्दा र संघीयता
२०७१ फाल्गुन १९, मंगलवार ०१:५१ गते
नेपालमा सात सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको चुनाव ६४ सालयता दुई–दुईपटक भएर पनि संविधान लेख्न सकिएको छैन । संघीयताको मुद्दाले संविधान लेखन जटिल बन्दैछ । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा नसमेटिएको संघीयता मधेस विद्रोहको प्रतिफल हो । आन्दोलनका कारण अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको संघीयताले साकार रुप लिएमा देशको उन्नति र प्रगतिले रफ्तार लिन्छ भनेर जनमानसलाई भन्ने गरिएको हो । तर, यही संघीयताका विषयमा कुरो नमिल्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भएर गयो । दोस्रो संविधानसभा पनि संघीयताकै विषयमा अड्केर नेताले चुनावमा वाचा गरेको २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने समयसीमा उल्लंघन भएको छ ।
प्रतिपक्षहरुले जातीय पहिचानको अडान राख्दा दुई तिहाईभन्दा पनि धेरै सभासद् रहेको सत्तापक्षले संविधान जारी गर्न सकेको छैन । सहमतिका लागि भन्दै प्रतिपक्षहरुले संविधानसभामा कुर्सी फाल्ने र माइक भाँच्नेसम्मका काम गरे, सत्तापक्षले प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्न नसकोस् भनेर । सत्तापक्षले प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्ने प्रकृया पनि सुरूवात गरिसकेको छ । त्यो कदम जनघाती हो भन्दै प्रतिपक्षहरु सडकमा आएका छन् र काठमाडौँमा फागुन १६ गते जनप्रदर्शन भएको छ । त्यो प्रदर्शनमा जुटेको सहभागिताले प्रतिपक्षलाई पक्कै पनि उत्साहित बनाएको छ । र अब, जातीय संघीयताको वकालत बढेर जाने छ ।
संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । तर, अहिले सरकार सञ्चालन गरेका दलहरुको मोर्चा र विपक्षमा रहेको माओवादीसहितको मोर्चा दुई फरक खाले अवधारणा बोकेर हिँडेका छन् । सत्तामा रहेको मोर्चाले संघीयताको जुन खाका ल्याएको छ, त्यसले पहिचानलाई स्थापित गराउँदैन भन्ने विपक्षी मोर्चाहरुको मत छ । तर, त्यो विपक्षी मोर्चाहरुमा बसेकाहरुको पनि संघीयताका विषयमा फरक–फरक मान्यता छ । माओवादी पहिचान र सामथ्र्य दुवै खाले संघीयताको वकालत गर्छ । मधेसीवादी दलहरुलाई सबै मधेस एक प्रदेश चाहिएको छ । त्यहाँ भाषा र जातको कुनै वास्ता छैन । त्यस्तै, जातीय दलहरु जातीय राज्यकै वकालत गर्छन् ।
यसरी फरक–फरक अवधारणा बोकेका दल र संघहरुको मोर्चाले चलाएको आन्दोलनले दिएको सन्देश पहिचानको राज्य हो । त्यो पहिचान जातीयता नै हो भन्ने सन्देश प्रखर रुपमा गएको छ । जातीय रुपमा राज्यको नामकरण नहुँदासम्म पहिचान आउँदैन र पहिचान नझल्कँदासम्म राज्यको विकास हुँदैन अनि राज्यको विकास नहुँदासम्म देशको पनि विकास हुँदैन भन्ने मत उनीहरुको रहेको छ । के यो नै सत्य हो त ? यसको उत्तरका लागि हामीले संघीयता भएका देशका उदाहरणहरु हेर्नुपर्ला । संघीयता भएका देश हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । हाम्रो उत्तरी विशाल छिमेकी देश चीन संघीयताबिनै विश्वको नम्बर एक शक्तिशाली बन्ने देशका रुपमा उदाएको छ । त्यसो भए पनि संघीयता हेर्न टाढा जानुपर्दैन, दक्षिणी छिमेकी देश भारत संघीयता भएको देश हो ।
भारतको उदाहरण हेर्दा पनि हामी संघीयताका विषयमा सही तर्क नगरेको प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो पूर्वी तराईसँग सिमाना जोडिएको छ, भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको । पश्चिम बंगाल राज्य लगभग समथर भूभागमा छ । यसमा पहाडी भूभाग भनेको दार्जिलिङ हो । दार्जिलिङ गोरखाल्यान्ड राज्य मागेर पश्चिम बंगालबाट अलग हुन खोज्दैछ । तर, पश्चिम बंगालको राज्यको विगतको कम्युनिस्ट सरकार होस् वा अहिलेको ममता बनर्जीको तृमुल कांग्रेस सरकार, यो पहाडी भूभागलाई छोड्दै नछोड्ने पक्षमा छ ।
जोसुकै नेता होऊन्, पश्चिम बंगालबाट पहाड दार्जिलिङलाई अलग हुन दिन्नौँ भन्छन्, तर हाम्रो देशमा तराईमा पहाडको सानो भूभाग मिसाउन पनि स्वीकार छैन भन्दै मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको मोर्चामा छन् । त्यही भारतमा मैदानी राज्यले पहाड छोड्दिन भन्ने र हाम्रोमा पहाडसँग मिसिए मैदानको अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने । कस्तो उल्टो राजनीति चलेको छ ! तर, संघीयताको वकालत गर्दाचाहिँ भारतकै उदाहरण दिने गरिन्छ । अझ, जातीय राज्यको समर्थन गर्दासमेत भारतकै उदाहरण दिने गरिन्छ । भारतमा मिजोरम, नागाल्यान्डजस्ता जातीय राज्यहरु पनि नभएका होइनन् । तर, ती राज्यमा अरु जातिहरु लगभग शून्यको अवस्थामा छन् । हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन ।
त्यसो भए भारतमा विकसित र धनी राज्यहरु कुन–कुन छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा उच्च आय गर्ने पाँच राज्यहरुमा सबैभन्दा अगाडि रहेका कुन–कुन हुन्, त्यो हेर्दा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । उच्च आय गर्ने राज्यमा महाराष्ट्र
पर्दोरहेछ । कुल उत्पादनका हिसाबले महाराष्ट्र सबैभन्दा धनी राज्य भएको भारतीय वित्त मन्त्रालयको सन् २०१४–१५ को रिपोर्टले देखाएको
छ । त्यहाँको कुल उत्पादन १३ लाख २३ हजार ७३८ करोड रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय ६९ हजार ६२७ रूपैयाँ रहेको देखाएको छ । देशको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्रबाट उठ्दो रहेछ ।
त्यसपछि बाँकी चार राज्यमा उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडु र उडिसा छन् । महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश न जातीयताका आधारमा नामकरण भएका राज्य हुन्, न भाषाका आधारमा । तर, विकासमा उनीहरुले नै फड्को मारेका छन् । तामिलनाडु भाषाका आधारमा बनेको राज्य हो । तर, जातीयताका आधारमा नामकरण भएका राज्यहरुको उच्च आयमा कतै नामोनिसान देखिन्न । जब कि, त्यहाँको अवस्थामा जातीय नामकरणमा आधारित राज्य राख्नु अपरिहार्यजस्तै भएको थियो । यदि हुँदाहुँदै पनि हामीले पहिचानको पक्षमा दह्रो वकालत गरेका छौँ, राज्य निर्माणमा । जब कि, भारतको उदाहरणले पनि जातीय वा भाषाको पहिचानमा राज्यको नामकरण
नगरे पनि उच्च विकास भएको देखिएको छ र जातीय नामकरणले विकासमा कुनै भूमिका नखेल्ने पनि देखिएको छ ।
पहिलो कुरो देश विकासका लागि संघीयता नै आवश्यक पर्दैन, उत्तरी छिमेकी देशलाई हेर्दा यो कुरा पुष्टि हुन्छ । जातीयता र भाषाका आधारमा नामकरण हुँदैमा पनि विकास हुँदैन रहेछ, संघीयता भएको दक्षिणी छिमेकी देश भारतको उदाहरणले यही देखाउँछ । हामी नजिकका यी उदाहरणबाट नसिकेर कहाँ जादैछौँ । संघीयताका नाममा संविधान नबन्दा अब संघीयता हुँदैमा देश पनि बन्दैन भन्ने निचोडमा पुगेर निराश भएका सर्वसाधारणलाई उत्साहित बनाउनेभन्दा जुधाउने काममा नेतृत्व वर्ग किन लागेको
हो ? हामी आफ्नै अनुभवले पनि सिक्दैनौँ र नजिकको दृष्टान्तबाट पनि पाठ लिदैनौँ भने कहाँबाट कसका लागि परिचालित भएका छौँ ? सर्वसाधारणले जान्न र बुझ्न चाहेको यही हो ।